आजको समाचार: डा केसी विरुद्ध काउण्टर धर्नादेखि देखि रोहितपछि क्रिकेटर सन्दिप जोराको अर्को रेकर्ड – MySansar
आजको समाचार: डा केसी विरुद्ध काउण्टर धर्नादेखि देखि रोहितपछि क्रिकेटर सन्दिप जोराको अर्को रेकर्ड
Posted on January 31, 2019 February 1, 2019 by राजेन्द्र मगर
आज माघ १७ गते बिहिवार नेपालका अधिकाशं मिडिया चिकित्सा शिक्षा विधेयक, डाक्टर केसीको अनशन र युएइमा भएको टि २० क्रिकेट म्याचमा केन्द्रित भएका छन।
प्रतिनिधी सभाबाट चिकित्सा शिक्षा पारित भएपछि संसोधनको विकल्प पनि सकिएको छ। अर्थात डाक्टर केसीको अन्तिम आशा निराशामा परिणत भएको छ। आज अनशनको २३ औ दिन देशभर डाक्टर केसीको समर्थन र विरोधमा विभिन्न गतिविधी भए। संसद, सडक र मन्त्रीपरिषदको पत्रकार सम्मेलन जताततै डा केसीकै चर्चा भयो। बिहानै ११ बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा डा केसी विरुद्द काउण्टर र्याली भयो। उनलाई अस्पतालबाट निकाल्नु पर्ने नारा सुनियो।
अस्पताल क्षेत्र अनशन मुक्त क्षेत्र भन्दै केही प्राध्यापकहरुले अस्पतालमा नाराबाजीसमेत गरेका थिए। ‘डाक्टर केसी चाहिँदैन अनशन बस्न पाइदैन’ भन्दै नारा लगाइएको थियो। महराजगञ्ज क्याम्पसका पूर्व प्रमुख प्रा. डा राम प्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा केसीविरुद्ध नयाँ अभियान सुरु भएको हो। उप्रेतीलाई चिकित्सा शिक्षा जाचुबझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएको थियो।
विजय थापाको ‘असफल काउन्टर’ अनशनपछि डाक्टर केसीविरुद्ध अर्को प्रदर्शन : ‘डाक्टर केसी चाहिँदैन, अनशन बस्न पाइँदैन’ भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।
त्यस्तै त्यसको लगत्तै माइतीघर मण्डलमा नेपाल चिकित्सक संघ लगायत अन्य संस्थाहरुले डाक्टर केसीको जीवनरक्षा गर्न भन्दै र्याली आयोजना गर्यो। सरकारलाई डाक्टर केसीको माग पुरा गर्न दबाब स्वरुप उनीहरुले र्याली निकालेका थिए। चिकित्सक संघमा आवद्द डाक्टरहरु शिक्षण अस्पतालमा डा केसीको मागलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै विगत तीन दिनदेखि रिले अनशन बसिरहेका छन।
त्यसको लगत्तै विवेकशील नेपाली दलले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै संसद भवनको पश्चिम गेट अगाडि धर्ना दियो। नागरिकको भोट माफियाको नोटसँग साट्न पाइदैन भन्दै उनीहरुले धर्ना दिएका थिए।
त्यसको लगत्तै कांग्रेसको अवरोधको बाबजुत पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधी सभाबाट पारित भयो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइ सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राष्ट्रियसभामा तीन वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए।
सो प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भए। संशोधन प्रस्ताव राजपाका सांसद वृजेश चन्द्र लाल, कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र कांग्रेसका सांसदहरु सरिता प्रसाइ, प्रकाश पन्थ र बद्री पाण्डेको दर्ता भएका थिए।
बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भन्दै रातोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।
विधेयक पारित भए लगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डा केसीलाई भेटी अनशन तोड्न आग्रह गरे। ‘सरकारले तपाइको माग पुरा गरेन भनेर ज्यान नफाल्नस् अहिलेलाई आफ्नो जीवनरक्षा गर्नुस्।’ देउवाले केसीलाई भनेका थिए।
अनशन तोड्न केसीलाई देउवाको आग्रह भन्दै काठमाडौप्रेस डटकमले लेखेको छ।
त्यस्तै मन्त्री परिषदका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले डाक्टर गोविन्द केसीको माग सरकारले पुरा गरिसकेकाले अब पिलो कोट्याएको जस्तै एउटै कुरा नकोट्याउन आग्रह गरे।
उनले डा.केसीको माग पुरा भएको केसीलाई ५ सुझाव समेत दिएका थिए। डाक्टर केसीलाई उक्साउनेले नै अवतरण गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
डा. केसीप्रति सरकारका प्रवक्ताको कटाक्ष– सल्लाको डोरी बाटिँदैन भन्दै बाह्रखरी डटकमले लेखेको।
त्यस्तै डाक्टर केसीले सरकारले माग पुरा नगरेसम्म अनशन नतोड्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक प्रतिनिधी सभाबाट पारित भएपछि केसीले अनशन नतोड्ने बताएका हुन्। माग पुरा नभएसम्म अनशन जारी रहने केसीले बताएको उनका सहयोगी प्रितम सुवेदीले बताए।
अनशन नतोड्ने केसीको अडान भन्दै अनलाइन खबरले लेखेको छ।
नेकपाका नेता सुवाष नेम्वाङले डाक्टर केसीपक्षसँग अनौपचारिक छलफल सुरु भएको बताएका छन। डाक्टर केसीको अनशन लम्बिदै गएपछि नेम्वाङले यस्तो बताएका हुन।
सुवाष नेम्वाङ भन्छन्: डा केसी पक्षसँग अनौपचारिक सम्बाद सुरु भएको छ भन्दै नेपाल खबरले लेखेको छ।
युवा खेलाडी सन्दिप जोराले कीर्तिमानी अर्धशतक बनाएपनि अन्य खेलाडीले राम्रो ब्याटिङ गर्न नसक्दा नेपाल युएईसँगको पहिलो टी २० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा २१ रनले पराजित भएको छ। जितपछि युएईले ३ खेलको टी२०आईमा १-० को अग्रता बनाएको छ।
जोरा सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गर्ने खेलाडी भएका हुन्। जोराले १७ वर्ष १०३ दिनको उमेरमै अर्धशतक प्रहार गरेका हुन्। यसअघि कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गर्ने रेकर्ड क्यानडाका हिरल पटेलको नाममा थियो। उनले १८ वर्ष १७७ दिनको हुँदा आयरल्याण्डविरूद्ध नटआउट ८८ रन बनाएका थिए। जोराले भने युएईविरूद्धको खेलमा ४६ बलमा नटआउट ५३ रन हानेका हुन्।
विश्व क्रिकेटमा नेपालको अर्को रेकर्ड, अर्धशतक प्रहार गर्ने कान्छा खेलाडी बने सुनदीप भन्दै सेतोपाटी डटकमले लेखेको छ।
त्यस्तै माघ १२ गते युएईसँग भएको दोस्रो एक दिवसीय खेलमा नेपालका रोहित कुमार पौडेलले ५८ बलमा ५५ रन बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा अर्ध शतक बनाउने सबैभन्दा कम उमेरका युवा खेलाडी बनेका थिए।
उनले भारतका प्रसिद्ध ब्याटस् म्यान सचिन तेन्दुलकरको नाममा रहेको रेकर्ड तोडेका थिए।